Ixesha Elichitha Kakuhle- ISIQITHI se-okhi, NC - I-Airbnb
Ixesha Elichitha Kakuhle- ISIQITHI se-okhi, NC
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguAdam
Siyakwamkela kwigumbi lethu lokulala eliyi-5 kunye negumbi lokuhlambela eliyi-5 i-Intracoastal Waterway ikhaya elingaphambili elibukekayo kuyo yonke indlu. Iibhalkoni kumacala omabini endlu zikulungele ukuhlala uze wonwabele umoya wetyuwa. Uhlaziyo- Yonke ikhaphethi isusiwe yaza yatshintshwa yabekwa phantsi i-Vinyl Plank ngo-2021!
Indlu yethu enamagumbi okulala amahlanu e-Intracoastal Waterway Front ibonakala kakuhle ibe inezitepsi nje ezimbalwa eziya elunxwemeni. Amagumbi okulala amabini akhokelela kwibhalkoni enembonakalo entle yomjelo wamanzi. Amagumbi okulala amahlanu aquka iibhedi ezinkulu ezimbini, iibhedi ezinkulu ezintathu neebhedi ezimbini ezilala abantu ababini, ezilala abantu abayi-12. Igumbi lokulala ngalinye linefeni esesilingini. Iindwendwe ziza kukwazi ukusebenzisa umatshini wokuhlamba nowokomisa impahla. Le ndlu ikumqamelo ibe inendawo eyaneleyo yokupaka iimoto ezininzi nesikhephe. Le ndawo inocwangciso oluvulekileyo phakathi kwegumbi lokuhlala, ikhitshi kunye negumbi lokutyela. Kukho igumbi lokuhlala elongezelelekileyo kumgangatho ophezulu. Omabini amagumbi okuhlala anesofa ezimbini, ifeni esesilingini kunye neTV. I-intanethi ekhawulezayo ene-Wi-Fi iyafumaneka ukuze uyisebenzise. Iindwendwe ziyakwazi ukusebenzisa umatshini wokuhlamba nowokomisa impahla. Ikhitshi linazo zonke izixhobo zombane, ifriji/i-deep freezer/umatshini wokwenza umkhenkce, isitovu/ioveni, umatshini wokuhlamba izitya, i-microwave, i-blender, iikomityi zekofu, ukunxitywa kweglasi, ukunxiba isiliva, iiglasi zewayini nezinye izinto ezifunekayo ekhitshini nokunye. Iindwendwe ziyakwazi ukusebenzisa umngxuma womlilo ophandle kunye nechweba ngasemanzini angaphakathi. Ixesha lokufika ngu-4:00pm EST kwaye Ixesha lokuphuma ngu-10: 00am eSt. Izinto zebhedi zifumaneka nge- $ 120 ngokuhlala ngakunye. Nceda undixelele ukuba ungathanda amashiti xa ubhukisha.
4.61 · Izimvo eziyi-92
ISiqithi sase-Oak sinokufikelela ngaphezu kwe-60 elunxwemeni loluntu ngokubanzi kunye needokhi zokuloba kunye nee-piers ezi-2, iindawo zokukhwela izikhephe kunye nezinye iindawo ezininzi zokufikelela kwi-ICW kunye ne-Davis Canal eyenza le ndawo ibe yindawo efanelekileyo yokuloba, ukukhwela isikhephe, ukukhwela inqanawa kunye neminye imisebenzi yamanzi. Isiqithi sase-Oak singaphantsi kweyure enye ukusuka eMyrtle Beach, imizuzu engama-30 ukusuka eWilmington, NC kunye nemizuzu eli-10 ukusuka kwiivenkile kunye nokutya kwi-Historic Southport, NC (ikhaya lemuvi eSafe Haven).
Umbuki zindwendwe ngu- Adam
Sinokufikelelwa nge-imeyile, ifowuni okanye isicatshulwa ngexesha lokuhlala kwakho njengoko sihlala kwiSiqithi.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Oak Island